BAYDHABO, Somalia- Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed, kaaso ku saabsanaa in dadka ay ra’yigooda ka dhiibtaan qoraalka qabyada ah ee Qorshaha Guud ee hannaanka dib-u-eegista Dastuurka oo ay Wasaaradda gacanta ku hayso.
“Maanta waxaa sharaf inoo ah in kulamadii wadatashiga mid kamid ah aan ku qabano Baydhabo, waxa aan idinkaga baahannahay in aad taladiina ku darsataan qabyo qoraalka Qorshaha Guud ee haannaanka dib-u-eegusta Dastuurka ee aan diyaarinayno,” Ayuu yiri Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Kulankan ayaa qayb ka noqonaya shirar is-daba socday oo muddooyinkan wasiirka Dastuurka Somalia uu ku qabtay magaalooyinka Garowe iyo Muqdishu, kuwaasoo lagu raadinayo in isbadal lagu sameeyo Dastuurka Somalia.
Barlamanka Somalia, ayaa horay u magacaabay Guddiyo ka imaanaya Aqallada Wakiillada iyo Senet-ka kuwaasoo loo igmada arrinta uu hadda hayo Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo horay loogu eedeeyay inuu farogalin ku sameeyay qodobo kamid ah Dastuurka KMG ah ee dalka Somalia.
​Suldaan Garaase oo ka hadlay Shirka Beesha Leelkase uga socday Garowe [Dhagayso]
Puntland 09.07.2017. 14:55
GAROWE, Puntland- Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka mid ahaa madax dhaqmeed Puntland islamarkaana ka qayb galay kulan waxgaradka beesha Leelkase uga socday magaalada Garowe, ayaa ka hadlay waxyaabaha la isla gaaray xilli uu tilmaamay in wajigii koowaad la ...
Puntland: Ciidanka PSF-ta oo sheegay inay dileen 18 katirsan Shabaab
Puntland 09.07.2017. 13:09
​Puntland oo gacanta ku dhigtay 14 qof oo Ajnabi ku jiro [Dhagayso]
Puntland 11.07.2017. 12:41